DivvyHQ: Yakakwira Vhoriyamu Kuronga Kwemukati uye Kufamba Kwebasa | Martech Zone
DivvyHQ: Yakakwira Vhoriyamu Kuronga Kwemukati uye Workflow
Mugovera, Gunyana 12, 2015 Douglas Karr
Kana iwe uri kushanda kune imwe kambani yebhizimusi, kuronga zvemukati uye kuitisa kuri pakati peyako nzira yekutengesa. Dambudziko iri kugadzirisa mazano, zviwanikwa, kupihwa mabasa, uye kuongorora huwandu hwese hwekugadzira. DivvyHQchikuva chinopa zvese zvishandiso zvinodiwa kubva pakuita kusvika pakuitwa. Iyo chikuva chakagadzirirwa zvese zvemukati uye zvemagariro midhiya kutsikisa.
DivvyHQ igore-rakavakirwa, zvemukati kuronga uye yekugadzira yekufambisa chishandiso chakavakirwa kubatsira vashambadziri uye vanogadzira zvemukati kuwana / kugara vakarongeka uye kubudirira kuita zvinoda, zvakaoma uye zvemukati-centric kushambadzira matanho. Kuita kwaDivvy kwakasarudzika kunosanganisa mawebhu makarenda ewebhu, manejimendi manejimendi uye kubatana kwepamhepo kubatsira zvikwata zvepasi rese kutora pfungwa dzemukati, kupa uye kuronga mapurojekiti ezvemukati, kuburitsa chero mhando yezvirimo uye kugara pamusoro pemazuva ekugadzirwa.
Dashboard - Tora pfupiso yekukurumidza yezviri kukodzera, zviri kuitwa uye zviri kuitwa nechikwata chako izvozvi.
Unlimited Yakagovaniswa Makarenda - Akawanda akagovaniswa makarenda sezvaunoda kuti nyika yako irongwe uye nechikwata chako papeji rimwe chete.
Nyore Workflow Management - Kunyangwe hazvo saizi yechikwata chako, kana kuomarara kwemaitiro ako ekugadzira, Divvy ichakubatsira kuti zvigadzirwa zvako zvibudiswe, zvibvumirwe uye zvibudiswe nemazvo.
Chero Rudzi rweZvinyorwa - Iwe unoburitsa zvinopfuura zvingori zvemadhijitari. Shandisa Divvy kubatsira nekuronga uye kugadzirwa kwemhando ipi zvayo yezvinyorwa zvaunoda kugadzirisa.
Zvemukati / Zvemagariro Kuburitsa - Bvisa chikuva kusvetuka uye nyore kutumira zvemukati zvemagariro nemifananidzo zvakanangana neFacebook, Twitter, nevamwe.
Paka Pfungwa Dzako Huru - Ndiani anoziva nguva uye kubva kunaani zvemukati pfungwa dzinogona kuuya. Iyo Divvy Parking Lot inobvumira timu yako kuti ichengete mazano avo kusvikira musangano unotevera wekuronga zvemukati.
chibatiso - Chengetedza zvemukati zvakachengeteka pamwe nechengetedzo matanho akaiswa neDivvyHQ.
Unogona kuedza DivvyHQ mahara ne kusaina kunzvimbo yavo.
Tags: zvemukati basakarenda yezvinyorwakubatirana zvemukatimazano emukatizvemukati maitiro kuyererakuronga zvemukatidivvyhq